/ ngwaahịa / ndị ọzọ na- / Boldenone Undecylenate (Equipoise) Akụrụngwa
Rating: SKU: 13103-34-9. Category: ndị ọzọ na-
Usoro Molecular: C30H44O3
Molekụla arọ: 452.6
Ọ bụ ezie na ọ na-arụ ọrụ ruo ogologo oge, Equipoise Raw material na-agbanye ihe dịkarịa ala otu ugboro n'izu site na ndị na-eme egwuregwu. A na-ejikarị ya eme ihe na 200-400mg (4-8 ml, 50mg version) kwa izu maka ụmụ nwoke, 50-75 mg kwa izu maka ụmụ nwanyị. Kwesịrị ka ụdị 25mg bụrụ naanị ngwaahịa dịnụ, ogo ogwu nwere ike bụrụ ezigbo iru ala. Usoro usoro onunu ogwu nwere ike kewaawanye, ikekwe inje na-enye kwa ụbọchị iji belata nkasi obi. Onye kwesiri ịkpachara anya ka igbanwe saịtị ogwu mgbe nile, iji zere iwe ma obu oria. Ọ bụrụ na a gbanye olu mmanụ buru oke ibu n'otu saịtị, etuto ahụ nwere ike ịmalite nke chọrọ ịwa ahụ. Iji zere nsogbu dị otú ahụ, ndị na-eme egwuregwu na-ejedebe ọgwụ ọ bụla na 3ml ma weghachite saịtị ọ bụla karịa otu ugboro kwa izu, ọkacha mma kwa izu ọ bụla. Na ngwa ngwa ngwa ngwa nke a nwere ike ịchọ iji ọ bụghị naanị ndị gluteus, kamakwa n'apata ụkwụ mpụga maka saịtị ịgbawa. N'ezie nsogbu niile metụtara 25mg na 50mg dosed ngwaahịa na-ekpochapụ na ndị ọhụrụ 100 mg na 200mg / ml nsụgharị nke a steroid, nke o doro anya na-enye onye ọrụ ọtụtụ ndị ọzọ onunu ogwu nnwere onwe na ogwu nkasi obi.
Nke a bụ ihe bụ isi testosterone na Equipoise Raw material. Ngwaọrụ Equipoise Raw na-enye ohere maka usoro ọgwụgwọ zuru oke nke testosterone, na-enweghị ịchụ ọtụtụ ihe n'usoro nke uru ndị a tụrụ anya ya. Ekwesịrị ịchịkwa nrụpụta estrogen na nchịkọta a, mana ka kwesiri iru ebe ọ na-enyere aka n'ịkwalite steeti anabolic. Nnukwu ndị na-amalite ịzụ anụ ahụ. Okirikiri okirikiri maka ndị niile bidoro na-arụ ọrụ ahụ na ndị ọzọ chọrọ inweta mmụọ. Cycle na-ebute oke uru yana oke etrogen.